Klein, Naomi (2002) Izintango Namafasitela - ibhalwe nguNaomi Klein yahunyushwa ngeSiZulu nguNontobeko Hlela. Centre for Civil Society : -.
Ibhalwe nguNaomi Klein yahunyushwa ngeSiZulu nguNontobeko Hlela
Isithombe sikhombisa uNaomi Klein emi ne-activist le-CCF
Ezinyangeni ezimbalwa azedlule, ngenkathi ngifuna ulwazi oluthile olulahlekileathile emaphepheni ami, ngabona kukhona umklamo owawulokhu uqhamuke njalo; lomfanekiso wawulokhu uvele njalo njalo; izithiyo ezihlukanisa abantu kwizinsizakusebenza zomphakathi zaphambilini, abantu sebeyavalelwa ekutholeni umhlaba kanye namanzi, bayavinjelwa ekukwazini ukuwela imingcele, ukuveza uvo lwabo oluphikisayo ezindabeni zombusazwe, ukubhikisha ezitaladini, kanye nokuvimbela osopolitiki ukudlulisa imithetho enomqondo kubantu ababaqoka.
Okunye okunguthango akulula ukuthi ukubone, kodwa kukhona ngendlela efanayo. Uthango olungabonakali lugxunyekiwe ezikoleni zase-Zambia ngenkathi kwethulwa i-“user fee” emfundweni, lokhu kwenziwa ngezeluleko zebhange lomhlaba, ngenxa yalokhu izigidi zabantu seziyavimbezeleka ukuthi zikwazi ukuthola ithuba lokuthi zifunde. Uthango luyagxunyekwa emingceleni ezungeze umndeni othize eCanada lapho imithetho kahulumeni wakhona eshintsha i-small scale agriculture wayenza into yokungcebeleka (luxury item), lokho okwenza ibize, abantu bangabe besaba nawo amandla okuyithola ikakhulu kulesi sikhathi lapho intengo yokukhiqiza nezimboni zamaplazi yehla kakhulu. Kukhona uthango lwangempela olungabonakali ulugxumekwayo oluzungeza amanzi ahlanzekile eSoweto, ngenkathi intengo yalawo manzi ikhuphuka ngenxa yohlelo lokwenziwa kwemisebenzi kahulumeni ibe ngeyabantu abazimele okuphoqa izakhamuzi ukuthi zisebenzise amanzi angcolile. Lukhona futhi uthango olugxunyekwayo oluzungeza umbono wentando yeningi uma i-Argentina itshelwa ukuthi ngeke ithole imalimboleko evela kwi-International Monetary Fund (IMF), uma ingehlisi inani lemali lelizwe elilifaka ezintweni ezidingwa umphakathi, uma lingaqhubeki nokudayisa izinto zikahulumeni, azidayiselwe abantu abazimele, futhi i-IMF ithi i-Argentina ayiyeke ukusiza izimboni zasekhaya, ikusho konke lokho ngesikhathi lelizwe lihlangatshezwe izinkinga zomnotho ezenziwe nzima kakhulu yiyo kanye leyo mithetho ebekelwa yona. Lolu thango, ngokuseqinisweni ludala, lungangesikhathi sokwelunjwa.. U-Eduardo Galeano wabhala encwadini ebizwa ngokuthi i-Open Veins of Latin America ukuthi izenzo ezinje zibophela izizwe. Wayekusho lokhu eqondise emibandeleni eyayibekwa i-Brithani ngo1824 iyibekela i-Argentina uma yayifuna ukuthi iyiboleke imali.
Selokhu kwathi-nhlo, uthango luyingxenye yokuba nemali eningi yokuqhuba umsebenzi noma ibhizinisi (capitalism), le ndlela yokuhweba kwaku yiyo kuphela indlela yokuvikela impahla yabantu emaqoleni, kepha ubuqili obusekele lezi zintango sebuqala ukuba soabala. Uma uhulumeni ophethe ngendlela yokuqhuba umqondo wokuthi zonke izinto zingeza Hulumeni (socialism), lapho wonke umuntu elingana nayo yonke into ezweni ingeyabantu, ethatha impahla nomnotho obuphethwe izinkampani ezizimele lokho kubukwa yizimakethe zokuhweba zomhlaba njengesono (u-Hugo Chavez waseVenezuela kanye no Fidel Castro waseCuba bangofakazi). Isivikelo esinikezwa izinkampani ngokomthetho ngenxa yezivumelwano zokuhweba okukhululekile akufinyeleliswanga ebantwini base Argentina ababebeke izimali zabo emabhange akoCitibank, Scotioabank nase-HSBC, bazithola sebetshelwa ukuthi imali yabo abanye abebeyisebenzele izimpilo zabo zonke, sekuthiwa ivele yanyamalala. Nabasebenzi bakwa-Enron nabo abatholanga ukwamukelwa ezimakethe eziziqhayisa ngokuthi zihlonipha umnotho ozimele (private wealth) ngenkathi zithi izisebenzi zizama ukudayisa imishuwayilense yazo yempesheni (privatised retirement portfolios) kodwa abaphathi bakwa-Enron bona bakwazi ukuthola imali ngenkathi bevunyelwa ukuthi badayise.
Kusenjalo kukhona izintango ezisemqoka ezihlaselwayo; kulokhu kujaha ukudayisa izinto ebeziphethwe nguhulumeni, izithiyo (barriers) ebeziphakathi kwabantu bonke nangasese njengokuthi izikhangiso (advertisements) zingafakwa ezikoleni, ebezibhekelwe ukuthi kungenziwa inzuzo ngokunakekela abagulayo, noma ukuthi izindawo zokuthuthwa kwezindaba (njengeziteshi zomabonakude, imisakazo, kanye namaphephandaba) zingasetshenziselwa ukukhuphula (promote) umphathi ezinye izinto zakhe, zonke lezi zithiyo sezisusiwe. Zonke izindawo ebezivikelwe seziklayiwe zavulwa, uma sezivaleka futhi zisuke sezivalwa ukungena kwezimakethe ezindaweni ebezivulekile.
Enye into evikele izimfuno zomphakathi esengozini, yileyo ehlukanisa ukudla oku- genetically modified nalokho okungakashintshwa okusenjengoba kunjalo emvelweni. Labo abakhiqiza izimbewu bahlulekile ukuqokelela ukuthi izimbewu zabo esezishintshiwe (tamper) zafakwa izinto ezazingadalwanga nazo, zingabhebhetheleki emasimini aseduze okungenza ukuthi zihlume nalapho bezingatshalwanga khona. Ezindaweni eziningi emhlabeni akuseyona into elula ukuthi uthole ukudla okumsulwa, ngoba konke ukudla okukhiqizwayo sekuchaphazelekile. Izintango ezivikela intando yabantu zibonakala zinyamalala ngesivinini, kepha lezo ezivimbela izinkululeko zabantu zibonakala zanda.
Kwabonakala kuyinto esemqoka kimi ukuthi ngiyibhekisise le ndaba yezingcingo ezivalela abantu, lapho ngiqala nginaka ukuthi lo mfanekiso wothango noma izivimbelo ezibekwa endleni yabantu wawulokhu uqhamuke njalo ezingxoxweni, nakwizinkulumo mpikiswano nase mibhalweni yami imbala. Le minyaka elishumi edlule yokudayisa okunokuxhumana phakathi ibilokhu iqhamuka nezethembiso zokuthi izivimbelo (barriers) ebezikhona zizodilizwa, besithenjiswa ukuthi sekuzoba nokuhambelana okukhulu phakathi kwabantu emazweni ahlakune nokuthi inkululeko izokhula. Kodwa eminyakeni eyishumi nantathu (13) emva kokuba kwakujatshulelwa ukuthi udonga lwase Berlin ludilikile, sisazungezwe izingcingo ezisihlukanisayo, kunoqhekeko phakathi kwabantu nasekutheni sikwazi ukuba nethemba lokuthi yini esingakwazi, noma esingeke sikwazi ukuyenza. Lokhu, ukuqhubeka kwezomnotho (economic process) okubizwa ngokuthi i-globalisation isithinte wonke amacala (aspects) empilo, ishintshe yonke iminyakazo nemithombo yezemvelo lawenza aba into ebalekayo (measured) nenomnikazi (owned commodity). Umcwaningi wezindaba zabasebenzi uGerard Greenfield, ozinze eHong Kong uthi isigcawu se-capitalism kulesi sikhathi asikho nje maqondana nokuhweba ngendlela ejwayelekile yokudayisa izimpahla eziningi ngaphesheya kwemingcele. Manje sekumaqondana nokondla isidingo sokukhula sezimakethe esingadeliyo, ngokuthi kushintshwe incasiso kubizwe ngemikhiqizo yamasector abekade aziwa ngokuthi ayingxenye yawo wonke umuntu ebe kade engeyona futhi into edayisayo. Ukuhlaselwa kwezinto zomphakathi yilezo ezizimele ngasese njengamabhizinisi sekuze kwafika ezintweni ezifana nezempilo, imfundo, kanye nemicabango yabantu (ideas), ama-genes, kanye nezimbewu, konke sekuthengiwe kwavikelwa ngumthetho, ngisho namakhambi esintu imbala, amanzi ngisho nama-human stem cells. Uhwebo olukhulu iMelika elenza namazwe angaphandle yilolo lokuthi linelungelo ngokomthetho lokuba yilona kuphela izwe elinelungelo lokuthengisa ngezinto ezithile (copyright) (loluhwebo seluze lwadlula ukudayisa kwalo ngezimpahla ezikhiqiziwe noma izikhali). Imithetho yokuhweba ephathelene nezizwe ezahlukene akufanele yaziwe/ kucatshanwge ngokuthi idibhiza izithiyo ezivimbela indlela eya ekudayiselaneni, kepha kumele iqondwe ngokucophelekile njengenqubo ebeka izithiyo ezintsha eziphathelene nokwenziwa kwemisebenzi ethile yobuchwepheshe kanye nezinsizakusebenza ebezisandakudayisa ngasese. Lamalungelo aphathelene nohwebo olumaqondana nomnotho wokuhlakanipha (Trade Related Intellectual Property) yiwo avimbela abalimi ukuthi bakwazi ukuphinda batshale imbewu evikelwe ngokomthetho yinkampani yakwaMonsanto. Yiwo futhi okwenza kungavumelani nomthetho ukuthi amazwe ahluphekayo azakhele amakhambi ashibhile (generic drugs) ukuze anike abantu babo abakudingayo.
Ngenxa yokuthi ngale kwalezi-zintango ezingabonakaliyo kukhona abantu abavalelwe ekutheni bakwazi ukuya ezikoleni, ezibhedlela, emisebenzini, amaplazini, emakhaya nase miphakathini yabo, i-globalisation iyavivinywa. Ukudayisa izinto zomphakathi ngobuningi nokukhipha emthethweni (deregulation) sekuzale izinqwaba zabantu ezivalelwe, usizo lwabo olungasadingeki, izindlela zabo zokuphila esezibizwa ngokuthi zisemuva (backward), nezidingo zabo ezingafezwa. Lezi zintango ezibandlulula ngokuhlukanisa abantu zingalahlekisa ngomsebenzi wonke wokwakha uhwebo, futhi zingaholela ekulahlekeni kwezwe lonke, njengoba kwenzekile e-Argentina. Uma kukhulunywa ngezwekazi lase-Afrika kuyabonakala ukuthi lelizwekazi lizifica lidingiselwe esithunzini somhlaba, kusengathi lelizwekazi lisusiwe ebalazweni nasezindabeni zomhlaba, libonakala kuphela la izakhamuzi zalelizwekazi zibukwa ngamehlo anensolo ngoba zibonwa sengathi zimdibi munye nalabo abalwa emazweni azo, noma sengathi nazo ziyingxenye yophekulazikhuni noma izinnhlanya (fanatics) ezilwisana ne Melika.
Empeleni bayingcosana kabi abantu ababiyelwe yilezi-zintanga abasebenzisa indluzula. Iningi labo lanquma ukuthi basuke ezindaweni abahlala kuzo ezisamaphandleni baye kwezisemadolobheni, uma lokho kungaphumeleli baye kohlala emazweni omhlaba. Yilapho-ke benqwamana nezintango ezisobala, lezi ezakhiwe ngamaketanga kanye nocingo oluhlabayo, olumiswe izindonga zikasimende kanye nezibhamu. Uma ngizwa ibinzana olukhuluma ngo ‘hwebo olukhululekile’ angikwazi ukuyeka ukubona engqondweni yami imifanekiso yamafekthri akheyijiwe (caged) engawabona ngenkathi ngivakashele e-Phillippines nase- Indonesia, lama fekthri ayezungezwe ngamasango, imibhoshongo yogqayinyanga namasosha. Lokhu kubiya kuvimbela imikhithizo eyawakha lapha ngemali yokuboleka ukuthi ingaphumi nangengozi, nokuthi abahleli bezinyunyana bangakwazi ukungena. Ngiphinde ngikhumbule uhambo engisanda kuluthatha olwangiyisa ehlane lweningizimu ne-Australia lapho ngavakashela khona indawo yababanjiwe (detention centre) yase Woomera eyaziwa kabi (infamous). Lapha e-Woomera amakhulu ezimpabanga zase Afghanistan nase Iraq ezibalekela ingcindezelo nababusi abangaphikiswa emazweni abo bethatha khona izinyathelo ezinzima ukwenza izinto ezizokwenza umhlaba ubone ukuthi kwenzakalani emva kothango. Izinyathelo abanye abazithathayo wukuya ezitelekeleni zokuduba ukudla, abanye begxumela phansi besuka ophahleni lwezinkomponi abahlala kuzo, abanye baphuza izinsipho zokugeza izinwele, baze bathunge ngisho izindebe zomlomo abanye.
Esikhathini samanje amaphephandaba agcwele izindaba ezishaqisayo ngalabo abasuke bebaleka emazweni abo, bezama ukuthi bakwazi ukuhlala kulamazwe abasuke bebalekela kuwo. Bazama ukuwela imingcele ngokuzifihla phakathi kwemikhiqizo yona ekwazi ukuhamba ngenkululeko engcono kunabantu. NgoZibandela ka2001, izidumbu zabayisishagalombili (8) zabomdabu base Romania okwakukhona kubo nezingane ezimbili, zatholakala enqoleni yokuphatha impahla eyayihamba ngomkhumbi ophethe ifenisha yamahhovisi. Babulawa wukuphelelwa umoya ngenxa yohambo olude olwandle. Ngonyaka ofanayo, izidumbu zabanye ababezama ukubaleka zatholakala e-Eau Claire, indawo eseWinsconsin. Laba bona batholakala beshonele enqoleni eyayihamba ngomkhumbi eyayithwele izinto zikabhavu. Ngonyaka owandulela lowo, izidumbu zabantu abangamushumi amahlanu nesishagalombili (58) base China zatholakala emotweni yokuthutha izimpahla (lorry) eDover, nabo bephelelwe umoya.
Zonke lezi zintango zixhumene: ezangempela ezakhiwe ngensimbi nocingo, zidingakalela ukuthi zigcizelele lezi ezingabonakali, lezi ezisusa izinsizakusebenza nomnotho ezandleni zeningi. Akukwazi ukwenzeka ukuthi umnotho wethu omningi kangaka ungasuswa kubantu zibe zingekho izindlela ezithile zokuthiba (control) uthuthuva olungasuka namandla okuhamba (mobility) neningi. Umsebenzi omningi wezinkampani zonogada usemadolobheni lapho isikhala phakathi kwabanothile nabampofu sisikhulu khona, emadolobheni afana noGoli, Sao Paulo ne New Delhi, izinkampani zonogada zidayisa ngamasango ensimbi, izimoto ezihlomile, (armoured cars) ama-alarm system anemininingwano eminingi, kuze kuqashiswe ngonogada. E- Brazil kuchithwa amabhiliyoni amane kuya kwamahlanu emali yaseMelika (US $ 4-5 bn) ekukhokheleni onogada abazimele. Amaphoyisa aqashiswayo akulelazwe angu 400, 000 adlula amaphoyisa kahulumeni ngobuningi, kwamane kulawo aqashisayo, uhulumeni unelilodwa. ENingizimu Afrikha, ezweni lapho kusatholakala khona ukuhlukana okukhulu endleleni abantu abaphila ngayo, imali echithwayo konogada abazimele ifika kumabhiliyoni angu 1.6 emali yase Melika (US $ 1.6bn) ngonyaka, le mali iphindwe kathathu kuleyo uhulumeni ayichitha ekwakheni imizi yabantu abantulile. Kubukeka sengathi lezi zinkompolo ezinamasango ezivikela abanako kulabo abangenakho sezifana nama-microcosms alokho osekubonakala sengathi uhulumeni wovimbelo (global security state), hhayi idolobhana lomhlaba wonke (global village) elizimisele ngokudiliza izindonga nezithiyo njengoba besithenjiswa uma kukhulunywa nge-globalistaion, kodwa okuvelayo yi-network yenqaba (fottress) exhunyaniswe namaphaseji ohwebo oluhlonyisiwe.
Uma kubonakala, sengathi lo mfanekiso usumkhulu kakhulu, yingoba iningi lethu elihlala emazweni aseNtshonalanga asijweyele ukuzibona lezi zintango nezikhali zempi. Amafekthri avalelwe ngemuva kwamasango kanye nezindawo zokuvalela ababalekayo emazweni abo zisalokhu zifihlwe ezindaweni ezisemajukujukwini ngoba uma zilapho ngeke ziphonse inselelo kulokho abakubiza ngokuthi izwe elingenamingcele. Kule minyaka embalwa edlule ezinye zalezintango sezivele obala, yize kalufuphi, ngesikhathi kukhona imihlangano lapho kuqhutshezelwa phambili lolu hlobo lwe-globalisation olunobuhluku, sekuthathwa njengenjwayelo ukuthi uma abaholi bamazwe omhlaba befuna ukuhlangana baxoxisane ngenjongo yokuvumelana ngezindaba eziphathelene nohwebo, kufanele kwakhiwe inqaba lapho abaholi labo bezozivikela khona olakeni lwabantu. Ngenkathi idolobha laseQuebec li-hosta iNgqunguthela yamazwe aseMelika ngoMbaso wa2001, uhulumeni wase Canada wathatha isinyathelo esasingakaze sibonwe ngaphambili, sokuthi kwakhiwe ihhoko hhayi nje elalizozungeza indawo lapho izingxoxo ezazizobanjelwa khona, kodwa lali zozungeza nengxenye yedolobha, lokho kwaphoqa izakhamuzi zaseQuebec ukuthi ziphathe izincwadi zemvume (pass) ukuze zikwazi ukungena emizini yazo nasemisebenzini. Enye into abahleli balemihlangano abayithandayo ukuthi imihlangano ibanjelwe ezindaweni okubukhuni ukuthi abantu bafinyelele kuzo: umhlangano wamazwe omhlaba acebe kakhulu e-G 8 wabanjelwa emajukujukwini ezintaba zaseCanada (Rocky Mountains), ngo 2001 umhlangano we-WTO wabanjelwa ezweni laseQatar lapho umholi wakhona engakuvumeli ukuphikiswa. Impi elwa nokuphekulazikhini (war on terror) nayo isingenye yezintango esezisetshenziswa, isetshenziswa abahleli bemihlangano ukuze bachaze ukuthi yini bengezukuwuvumela umphakathi utshengise ukungavumelani nezingxoxo ezisuke zenzeka. Okubi kakhulu ngalempi wukuthi, sekufaniswa abantu abangababhikishi abasemthethweni (legitimate protestors) nophekulazikhuni abazimisele ngokudicizela phansi.
Lokhu-okubikwa yizintatheli njengokulwa kwababhikishi, isikhathi esiningi kusuke kuyizehlakalo zenjabulo, kusuke kungazona nje izikhathi lapho kuhlatshwa izindlela umphakathi ophethwe ngayo kuphela, kodwa kubhekwa nokuthi azikho yini ezinye izindlela imiphakathi engaphathwa kangcono ngayo. Ngesikhathi ngiqala ukuba mdibimunye nalezi zinkomfa ezisuke ziphikisa, ngikhumbula ngizwa sengathi kukhona intuba kwezombusazwe eyayivulela- isango, ifasitela, okwabizwa ngukhomandanti uMarcos njengomfantu emlamdweni (a crack in history). Lokhu kuvuleka kwakungadalwanga yifasitela alaliphahlazekile endaweni yokudla yakwa-McDonalds, yize lokhu kwaku wumboniso owawuthandwa abathameli bezindaba zomabonakude. Kwakungenye into eyenza lokhu, kwakuphathelene nokuzwa sengathi kukhona izinto ezingenzeka, ezingafinyelelwa, kwakusengathi kukhona umoya ohelezayo, kungathi kukhona umoya owawugijimela ukuyongena engqondweni. Le mibhikisho edonsa isonto lonke ngokomthetho isuke iyindawo yokufundisana ngepolitiki, iyindawo lapho kunikwana khona amasu ngokuthi izinto zenziwe kanjani, kusuke kunemigubho yomculo, nemidlalo yeshashalazi eyenzelwa khona ezitaladini. Ngobusuku obubodwa, indawo iphenduka ibe idolobha lomhlaba elinomahluko, lapho okuphuthumayo (urgency) kuthatha isikhundla sokuduba (resignation). Lapha ufica abantu abangazani bexoxisana, izithombe ezidwetshiwe zikhangiswa, bese kufika ithemba lokuthi ushintsho endleleni yepolitiki ehamba ngayo lusengenzeka, kuyinto futhi ekuyiyo kuphela ekhombisa umqondo.
Ngisho nezindlela zokuvikela ezinehaba (heavy-handed security measures) seziphendulwe ababhikishi zaba yingxenye wombiko wabo; izintango ezizungeza izindawo zezinkomfa seziphenduke zaba izingathekiso zomfanekiso wezomnotho odingisa amakhulu ezigidi zabantu ukuthi bantule ekuhluphekeni nasekunganakweni (exclusion). Ukulwa okwenzeka ezintangweni akukhona kuphela lokhu okwenzeka ngezinduku nezitini; ufica ukuthi isisa esikhalisa unyembezi (tear gas) la-aphonswa ngamaphoyisa ayazwathuzwa ngezinduku zokudlala i-hockey, ombayimabyi bamanzi (water cannons), amahelikhoptha la asuke endizela phezulu egadile, ayabhinqwa ngokuthi kundiziswe amabhanoyi amaphepha emoyeni. Ngesikhathi senkomfa yamazwe aseMelika eyayibanjelwe eQuebec, idlanzana lababhikishi (activists) bakha isihlilingi sokhuni esikhulu, base basidonsela ocingweni olwalungamamitha amathathu ubude olwaluzungeze ingxenye yedolobha, ngalesi sihlilingi badubula ama-teddy bear bewaphonsela ngale kodonga. Ngenkathi kunomhlamgano webhange lomhlaba ne IMF ePrgue, iqembu lase Italy elibizwa ngokuthi I-Tute Bianche, laqoka ukuthi lingalwi namaphoyisa ayegqoke izimpahla ezimnyama kusuka enhloko kuya ezinyaweni. Lababhikishi bazimisela ngokufuna ukuhlakaza indlela umnotho uphethwe ngawo, kodwa indlela abenza ngayo izinto ikhombisa ukuzimisela ukunqaba ukulwa ngendlela eyejwayelekile, inhloso yabo akukhona ukuthi bafuna kube yibo ababusayo, bafuna ukufaka inselele ngendlela ukubusa kusentralazwe (centralised) ngayo.
Amanye amafasitela ayavuleka, kuzanywa ukuphindiselwa indawo nama-assets asedayiselwe abantu abazimele, kuzanywa ukuthi zibuyiselwe kubantu. Kwesinye isikhathi kuba abafundi abenza lokhu ngenkathi bekhipha imikhangiso emaklasini abo, noma beshintshisana ngomculo kwi-Internet , noma bakha izindawo zokusakaza izindaba ezizimele nge-software yamahhala. Ngenye inkathi kusuke kungabalimi baseThailand abavula lama fasitela ngenkathi betshala izitshalo ezindaweni zokudlala igalofu, noma ngenkathi abalimi baseBrazili abangasenamhlaba besika uthango olubiyele umhlaba ongasetshenziswa muntu, bewuguqula bewenza ipulazi lobambiswano. Mhlawumbe okwenza lamawindi avuleke, abasebenzi baseBolivia lapho bephindisela emuva ukuthi amanzi abo abesezandleni abazimele, noma kungaba yilabo abayizihlali zasemalokishini aseNingizimu Afrikha lapho bexhumelana ngogesi ngokungekho emthethweni. Uma sezibuyiselwe (reclaimed) lezizimbobo zavalwa. Emihlanganweni yezakhamuzi, kweyamakhansela, yamadolobha, ezindaweni zokusakaza ezizimele ezimiswe zaqiniswa, zanikwa amandla ngokuzibambela ngqo kwabantu, okungatheniwe amandla ukubukela nje.
Phezu kwemizamo yoku(privatise) kubukeka sengathi kukhona izinto ezingafuni ukuphathwa. Izinto ezifana nomculo, amanzi, imbewu, ugesi, nemicabango, zilokhu zizama ukuphunyuka kulezi zintango ezibiyelwe ngazo. Ngokwemvelo azithandi ukuvalelwa, zihlale zifuna ukuphunyuka, zithanda ukuthelelana impova (cross-pollinate), ziheleze ziphume ezintangeni, ziphume ngamafasitela avuliwe zibaleke.
Akubonakali kahle ukuthi kuzophumani kulezi zikhala esezikhululiwe nokuthi lokho okuzovela kuzobe kunamandla anele yini ukuthi kumelane nokuhlaselwa okuvela emaphoyiseni namasosha Ngenkathi umehluko phakathi kophekulazikhuni nababhikishi (activist) uqhubeka ufiphaziswa ngamabomi. Umbuzo wokuthi, yini ezolandela uhlale ungihlupha, njengoba uhlupha wonke umuntu obeyingxenye yokwakha lo mnyakazo womhlaba wonke. Uma ngiphinde ngibuka lezi ziqephu engazisika emaphepheni, ngizibona zinjengamakhadi eposi (post card), axoxa isigaba sokuqala ngendaba endala ephindaphindwayo, indaba exoxa ngabantu abasunduza izithiyo ezizama ukubavimba ngenkathi bevula amafasitela, behogela, benambitha inkululeko.